My Little Poem Factory: နောက်ဆုံးညနေ
« Home | ဒီနေ့ » | ဒီအခန်းလေး » | အချစ် » | သံယောဇဉ် » | ကြောင် » | လေခိုနေတဲ့ ညနေ » | ဆေးရုံ » | နွေ » | အိပ်တန်းပြန် » | ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ က အရေးတကြီး ခေါင်းလောင်းသံ » နောက်ဆုံးညနေ
Posted by Ðaywalker[Soul] on Sunday, January 25, 2009
at 9:35 AM | Permalink အဲဒီတုန်းက ညနေပေါ့ . . . .(အစတုန်းက ညနေလို့ ပြောရင်လည်း ရတာပဲ)တစ်သားမွေးရင် တစ်သွေးလှတဲ့ ညနေညနေတိုင်းမှာ တစ်သွေးလှပြီးညနေပေါင်းများစွာ မွေးဖွားရတာပေါ့အဲဒီအပုဒ်လေးကတော့ စွဲငြိဖွယ် လှလွန်းတယ်
May 1, 2009 at 3:45 PM ကိုအလင်းနစ်က အဆိုကောင်းသလိုကဗျာရေးလည်းကောင်းတာပဲနော်
November 1, 2009 at 7:13 AM တစ်သားမွေးရင် တစ်သွေးလှတဲ့ ညနေညနေတိုင်းမှာ တစ်သွေးလှပြီးညနေပေါင်းများစွာ မွေးဖွားရတာပေါ့ကောင်းတယ်ရှင်
November 3, 2009 at 1:57 PM hi impressive blog. We haveabig website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_phung&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog
Posted by phung bella |
June 14, 2012 at 8:14 PM PostaComment
ဒီနေ့ဒီအခန်းလေးအချစ်သံယောဇဉ်ကြောင်လေခိုနေတဲ့ ညနေဆေးရုံနွေအိပ်တန်းပြန်ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ က အရေးတကြီး ခေါင်းလောင်းသံ